Wararka Maanta: Isniin, May 28, 2012-Madaxweynaha Somaliland oo dhagax-dhigay dib u habayn lagu samaynayo Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Hargeysa
Madaarka ayaa lagu samaynayaa qolof ridid dhabaha ay diyaaraduhu ka Haadaan iyo guud ahaan madaarka oo dhan, iyadoo dib u hagaajinta ay maalgalisay dawladda Kuwayt, isla markaana ay fulinayso shirkad caalami ah oo laga leeyahay dalka shiinaha oo dhowaan ku guulaysatay tartan ay shirkado caalami ahi u galeen dib u casriyeynta madaarka diyaaradaha ee magaaladda Hargeysa.
Shirkadan ku guulaysatay ee dib u hagaajin doonta garoonka ayaa la yidhaa China Horn Group, taas oo muddo sanad ah ku qaadatay inay ku casriyeyso garoonka diyaaradaha magaaladda Hargeysa, iyadoo laga joojiyey diyaaradihii waaweynaa ee ka soo degi jiray madaarka, balse diyaarado kooban oo yaryar loo baneeyey meelo ay ka soo degaan.
Wasiirka Wasaaradda Duulista iyo hawada Maxamuud Xaashi Cabdi oo munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay in madaarkan oo markii ugu horaysay la dhisay badhtamihii qarnigii labaatanaad uu soo maray duruufo kala duwan xiligana ay rajaynayaan inuu noqdo mid u dhisan qaabka garoomada diyaaradaha ee caalamiga ah.
Mudane Maxamud Xaashi Cabdi waxa uu sheegay inuu dadaal ugu jiro sidii uu u qurxin lahaa labada madaar ee dalka ugu weyn ee Madaarka Cigaal International Airport iyo ka Magaalada Berbera oo iyana aad loo habeeyey oo laga dhigayey mid la tartama Garoomadda caalamiga ah ee aduunka.
Madaxweynaha Somaliland Md: Axmed Maxamed Maxamuud Siillaanyo oo ka soo qaybgalay dib u habaynta madaarka ayaa uga mahad-naqay dawladda Kuwayt mashruuca dib u dhiska madaarada Hargaysa iyo Berbera oo uu ku baxaya adduun lacageed oo dhan 10 malyan oo dollar.
"marka hore waxaan aad ugu mahad naqayaa dawlada Kuwayd oo casriyeynta iyo habaynta garoomadda Hargeya iyo Berbera inoo maalgalinaysa, garoomaduna waxa ay ka mid yihiin muraayada laga daawado horumarka dhinacyada kala duwan leh ee Somaliland ku talaabsatay"ayuu yidhi madaxweynaha Somaliland oo ka hadlayey dib u habaynta lagu samaynayo garoonka Cigaal ee magaaladda Hargeysa.
Madaarkan Hargeysa ayaa laga joojiyey inay diyaaradaha waaweyn ka soo degaan ilaa inta la dhamaynayo, iyadoo loo wareejiyey madaarka magaaladda Berbera, balse waxa madaarka Hargeya qayb ka mid ah loo habeeyey diyaaradaha yar yar ee ganacsiga iyo kuwa ay wataan wufuudda caalamiga ah ee dalka booqashada ku yimaadda.